Sanduuqyada Hadiyadaha, Xusuus-qor, Tattoo Warqadaha - Yuxingyuan
Diyaar u ah inaan kula shaqeeyosi loo abuuro berri ka wanaagsan.
Shenzhen Yuxingyuan Gift Baako Co., Ltd. waa shirkad xirfad daabacaadda iyo baakadaha isku dhafan naqshadeynta, daabacaadda iyo dib-u-farsameynta. Ku takhasusay daabacaadda dhammaan noocyada sanaadiiqda baakadaha, sanaadiiqda midabka, sanaadiiqda kaararka, kaararka midabka, albumyada xayeysiinta, tags, buugaagta, boorsooyinka waraaqaha, istiikarada, buugaagta, istiikarka sawirka, albumsyada sawirada, sanaadiiqda dahabka, sanaadiiqda dharka…
Si macaamiisha loo siiyo wax soo saar iyo adeegyo daabacan oo tayo leh.
Baasto waraaqo gaar ah leh Bowknot pa fiican ...
Sanduuqa hadiyadaha fudud Doorka sanduuqyada hadiyadaha Fiican, muuqaal gaar ah oo soo koobi kara walxaha, ...
qeexitaannada kartoo, kartoo qurux badan ...
Tilmaamayaasha Tattooga Ubaxa Tilmaamayaasha tattoo qurxinta waxay ku siinayaan qurux yar noloshaada caadiga ah. ...
Dabool custo qeexitaanka qaabeynta qaabka ...
Xaga buugga ardayga warqad gu 'Xulo warqad loogu talagalay buugaagta ardayga: Marka hore, tayada pape ...
midabka maqaar caadadii buss faahfaahinta caadadii ...
Buuggan ganacsi ee dhammaadka-dhamaadka wuxuu leeyahay muuqaal-dhammaad-weyn iyo muuqaal-fure hoose oo aan lumin ...
Shirkaddu had iyo jeer waxay qaadataa horumarinta shirkad tiknoolajiyad casri ah daabacaadda u ah jihada horumarka, waxay la jaanqaadaysaa xilliyada, waxayna la socotaa macluumaadka warshadaha daabacaadda ee hadda jira iyo isbeddellada.
Waxaan leenahay qalab daabacan oo heer sare ah iyo heer farsamo xirfadeed.
Habka wax soo saarku waa hodan, dhab ahaantii wuu ku qancin karaa baahidaada.
Haddii aad u baahato, waxaan leenahay farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah oo aan kula soo xiriiro.
Dadka la sawiray ma dooran doonaan istiikarka tattoo
Dadka la sawiray ma dooran doonaan istiikarada tattoo Qof walbaa wuu garanayaa ereyga tattoo, sax? Maalmahan, indhaha dadka intiisa badan, qof kasta oo jidhkiisa ku leh Tattoo waxaa loo tixgelin doonaa inuu yahay qof bulsheed. Dad badan ...
Waa maxay jihada horumarka cusub ee alaabada xafiisyada xafiisyada
Waa maxay jihada horumarka cusub ee alaabada xafiisyada xafiisyada? Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo la wanaajiyay heerarka nolosha dadka, macaamiisha dalabkooda alaabada xafiisyada xafiisyada ayaa kordhay, taas oo sidoo kale ku dhalisay alaab-qeybiyeyaasha xafiisyada inay ...
U adeeg macmiil kasta si taxaddar leh.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku dhaqmaysay falsafadda ganacsiga ee "hal-abuurnimada, waxtarka, tayada, adeegga".
Cinwaanka: Tuulada Warshadaha Nanlian, Bulshada Nanlian, Longgang Street, Degmada Longgang, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha